#Hogaamiye Waare oo gaaray Dhuusamareeb waxa uuna lakulmay Sheekh Shaakir - Get Latest News From Horn of Africa
#Hogaamiye Waare oo gaaray Dhuusamareeb waxa uuna lakulmay Sheekh Shaakir
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa goordhow gaaray Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Wafdiga oo ka ambabaxay Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa Garoonka Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay,mas’uuliyin ka tirsan Maamulka Galmudug oo uu ugu horeeyo Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Magalada Dhuusamareeb.
Madaxweynaha ayaa loo galbiyay Xarunta Madaxtooyada Magaallada Dhuusamareeb waxa uuna halkaasi kulan soo dhaweyn ah kula la qaatay Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle ayaa saacadaha soo socda waxa la filayaa in uu kulan la qaato Ra’iisul WasaarahaSoomaliya Xasan Cali kheyre oo maalmahaan ku sugan Magalada Dhuusamareeb.
Ujeedka Safarka Madaxweyne Waare ayaa lagu Sheegay daminta dagaal beed dhawaan dhacay deegaano hoostaga Degamada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, kaas oo dhaliyay khasaare badan oo iskugu jira dhimasho iyo Dhaawac.
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa Magalada Baladweyne,isaga oo halkaasi u tegay khilaaf sabab u ahaa xilka qaadistii uu ku sameeyay guddoomiyihii Maamulka Gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed.